အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးသားသင့်ဦးနှောက်အဘို့ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်” တွမ် Chatfield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့တွင် 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလများအတွက် 2015 11.10 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ငါ့အသားဖြစ်၏ 18 လအရွယ်, သူမွေးဖွားခဲ့ကတည်းကငါသူနှင့်အတူစာအုပ်များဖတ်ဖြစ်ပါဘူး. ငါ "စာဖတ်ခြင်း" ဟုပြော, ဒါပေမယ့်ငါတကယ် "ကြည့်" ဆိုလို - ကျက်ဖော်ပြခြင်းမ, လာနေပြီ, ပစ်ခြင်း, cuddling, ဝါး, နှင့်အခြားအရာအားလုံးသေးငယ်တဲ့လူ့ဖြစ်လျက်ရှိလုပ်ဖို့ likes. ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လကျော်, သော်လည်း, သူရိုးရိုးကြည့်ဖို့ဒါပေမယ့်လည်းအနည်းငယ်အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့မစတင်နေပြီ. သူကသူ့အခန်းတံခါးကိုအပေါ်ပုံပြီး "တောင်ပေါ်က" မြို့တော် Y ကိုခေါ်ဆို; တစ်ဦးမြို့တော် H ကို "ဖြူကောင်" ဖြစ်ပါတယ်; တစ်ဦးမြို့တော် K သည်, "သားပိုက်ကောင်"; နောက် ... ပြီးတော့.
စာဖတ်ခြင်း, စကားပြောနဲ့မတူပဲ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စည်းကမ်းချက်များ၌လူငယ်တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုသည်. လူသားတွေဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာတချို့ form မှာစကားပြောခဲ့ကြ; ငါတို့သည်ငါတို့၏အာရုံခံသို့ခြစ်ရာမပေါ်မိန့်ခွန်းဆည်းပူးဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူမွေးဖွားလာကြ. အစောဆုံးအရေးအသား, သို့သော်, သာပေါ်ထွက်လာ 6,000 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က, နှင့်စာဖတ်ခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလုပ်ရပ်ငါ့သားကိုသင်ယူခြင်းသည်အဘယ်အရာ၏ version တစ်ခုဖြစ်နေဆဲ: အက္ခရာများစကားအဖြစ်လူသိများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထု၏အထူးမျိုးစိတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့သစ်ပင်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုသုံးသလောက်အတူတူပင်အာရုံကြောဆားကစ်ကို အသုံးပြု., ကားများ, တိရစ္ဆာန်နဲ့တယ်လီဖုန်းသေတ္တာများ.
ဒါဟာကျနော်တို့တ္ထုအဖြစ်ကို process စကားနဲ့စာလုံးမသာရဲ့. ကျမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့, ထို့ကြောင့်ဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်စိုးရိမ်နေကြအဖြစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုခင်းများများမှာ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က screen ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစကားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်စကားကွဲပြားခြားနားတုံ့ပွနျကွကအံ့အားသင့်စရာမဖြစ်သင့်ပါဘူး; သို့မဟုတ်ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ကိုကမ္ဘာ့စကားလုံးများ၏ပထဝီထဲမှာတည်ရှိသည်ကြောင်း.
သူမ၏အသစ်စာအုပ်များအတွက်, စကားသည်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိ: တစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်စာဖတ်ခြင်း၏ကံကြမ္မာ, ဘာသာဗေဒပါမောက္ခနောမိ Baron ကျော်တို့တွင်အစာဖတ်ခြင်းဦးစားပေးရွေးချယ်မှု၏စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူ 300 အမေရိကန်တလွှားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, ဂျပန်, ဆလိုဗက်ကီးနှင့်ဂျာမနီ. printouts မှစမတ်ဖုန်းအထိမီဒီယာအကြားတစ်ဦးကိုရှေးခယျြပေးသောအခါ,, လက်တော့ပ်, E-စာဖတ်သူများနှင့် desktops တွေနဲ့, 92% ဖြေဆိုသူကအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းခက်ခဲမိတ္တူခဲ့ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်.
ဤသည်အများအပြားအယ်ဒီတာများအံ့သြဖွယ်ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူး, သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုစာသားဖြင့်အနီးကပ်အလုပ်လုပ်သောသူ. ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်းနေစဉ်, ငါတူနိယာမ၏ version တစ်ခုမှတဆင့်ငါ၏အကြံအစည်တို့ကိုစုဝေးစေ: မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအကြှနျုပျ၏မှတ်စု collated ပြီးမှ, ငါကလည်းမှတ်စုပုံနှိပ်, လူအပေါင်းတို့သည်ရရှိလာတဲ့ printout ကျော် scribbled, အ margin တွေအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူစောဒကတက်, သော့အချက်များဘေးတွင်ထားရှိအာမေဍိတ်အမှတ်, ထိုကုတ်ခြစ်ရေးခဲ့သည်ရလဒ်ထွက်ဖြန့် - နှင့်ဤရှုခင်းကနေထွင်း (မြျှောလငျ့စှာ) ဆိုနိုင်ပါတယ်အငြင်းအခုံ.
အတိအကျအဘယျသို့ကဒီမှာသွားခဲ့သည်? အသက်အရွယ်နှင့်အလေ့အထသူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကစား. ရှာဖွေမှု - ဒါပေမယ့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏များစွာသောကြီးထွားလာသိပ္ပံနည်းကျအသိအမှတ်ပြုမှုလည်းရှိပါတယ်, လက်နက်နှင့်အနက်ဆုံးသောစွမ်းရည်, links နဲ့ခုန်နှင့်စပ်ရာမရှိသောအညွှန်း - ကစာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအခြို့အမျိုးမျိုးမှကြွလာသောအခါအကူအညီမရပါသို့မဟုတ်ကူးပြောင်းခြင်းကိုလုံးဝအဖျက်လည်းကောင်းဖြစ်ကြသည်.
သုံးစမ်းသပ်ချက်ကိုဖြတ်ပြီး တွင် 2013, သုတေသီများ Pam Mueller နဲ့ Daniel Oppenheimer လက်တော့ပ်ပေါ်သို့စာရိုက်နှိုင်းယှဉ် longhand မှတ်စုယူပြီးကျောင်းသားများကို၏ထိရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်. သူတို့ရဲ့နိဂုံး: လက်ဖြင့်အရေးအသား၏ဆွေမျိုးနှေးကွေးလေးလံ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုတ်သိမ်း" တောင်းဆိုနေပြီ, အကျဉ်းချုပ်ထက်ဤနေရာတွင်ကိုးကားကျောင်းသားတွေကိုအတင်းအကျပ် - အလှည့်အတွက်အယူအဆရေးရာနားလည်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ထိန်း, လျှောက်လွှာနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ပွတ်တိုက်အားကောင်းသောဖြစ်ပါသည် - ကအနည်းဆုံးဒါဝေးမှတ်မိဦးနှောက်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်အဖြစ်. ထို့အပြင်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးအသား၏ textured အမျိုးမျိုးကိုယ်တိုင်ကသိသာနိုင်ပါတယ်. တွင် တစ်ဦး 2012 အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှု, စိတ်ပညာရှင် Karin ဂျိမ်းသေးသုံးနည်းလမ်းတစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်အသွင်သဏ္ဌာန်မျိုးပွားဖို့သူတို့ကိုတောင်းဖတ်သို့မဟုတ်ရေးသားဖို့ဘယ်လောက်မသိသူကိုငါးနှစ်အရွယ်ကလေးများစမျးသပျ: ကွန်ပျူတာပေါ်သို့ရိုက်, ဗလာစာရွက်ပေါ်သို့ရေးဆွဲ, သို့မဟုတ်တစ်တွေက dotted အောကျော်ခြေရာကောက်. အမြိုးသားအ freehand ဆွဲခဲ့ကြရတဲ့အခါ, တစ်ဦး MRI စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်၏ဒေသများတွင်ဖြတ်ပြီး activation ပြသစမ်းသပ်ကာလအတွင်း scan. အခြားနှစ်ဦးနည်းလမ်းများမျှထိုကဲ့သို့သော activation ပြသ.
အလားတူသက်ရောက်မှုမှာတွေ့ရှိပြီ အခြား စမ်းသပ်မှုများ, စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအကြားနီးကပ် link ကိုသာအကြံပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်စာလုံးလက်ရေးမှတဆင့်သင်ယူနှင့်အက္ခရာများစာရိုက်မှတဆင့်သင်ယူတို့အကြားသူ့ဟာသူဖတ်နေ၏အတွေ့အကြုံမတူကြောင်း. ဤမှ Add ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပထဝီကို တစ်ဦးပုံနှိပ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်စာစောင်၏ heft ၏မှတ်ဉာဏ်မှပေးနိုငျ, သငျတို့သသေသပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံပြီးဇာတိကိုကိုက်ညီနေတဲ့နိဂုံးချုပ်ရရှိပါသည်: အဆိုပါမတူညီ, တောင်းဆို, အရာဝတ္ထု၏မော်တာ-ကျွမ်းကျင်မှု-ကိုသက်ဝင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောက်ပသည့် placeless ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုတက်ပွင့်လင်းလေ့, ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာစကားများအလေးခြိ scrolling မ.
နညျးလမျးမြားစှာခုနှစ်တွင်, ဒီတစ်ခုမမျှတရလဒ်ဖြစ်ပါသည်, ထိထိရောက်ရောက်ယင်း၏အဆိုးဆုံးမှာဒီဂျစ်တယ်ရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာပုံနှိပ်နှိုင်းယှဉ်. တစ်စားပွဲခုံကိုဖြတ်ပြီးငါ့အကုတ်ခြစ်ရေးခဲ့သည်-အပေါ်သို့ printouts Spreading, ကိုယ့် data တွေကိုရယူသုံးမရင့်; ငါဖန်တီးတစ်ခုခု၏ idiosyncratic ပထဝီသုံးသပ်တယ်, သယ်ဆောင်နှင့်ဆင်ယင်ခြယ်သ. သို့သော်လည်းငါသည်အွန်လိုင်းငါ၏အအပိုင်းအစသုတေသနပြု, ကျွန်မမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ up ပြုလုပ်ရိုက်ထည့်မယ်, ငါ့အစာဖတ်သူများဖော်ပြဆုကြေးဇူးကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုမြင်ကွင်းပေါ်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်: တစ်ပထဝီ, တစ်ဦးအခြေအနေတွင်. screens သူတို့၏အဆိုးဆုံးသူတို့အရူးအမူးနှင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသောအခါစက္ကူမှာ. သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာ, သူတို့တစ်တွေလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်၏ undreamt နည်းလမ်းတွေ၌အကြှနျုပျတို့၏အံ့သြစိတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနဲ့ activate လုပ်ဖို့အခမဲ့တစ်ခုခုပါပဲ.
အားလုံးအထက်, ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုထင်တယ်, ကျနော်တို့စာဖတ်ခြင်း၏တစ်ဦးတည်းသာလမ်းရှိကွောငျးအယူအဆစွန့်လွှတ်ရမယ်, ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာနှင့်စက္ကူအချို့ implacable စစ်အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်. ကျနော်တို့ကြီးထွားလာ Self-အသိပညာနှင့်တတ်နိုင်သမျှရည်ရွယ်ချက်မထိုက်မတန်သောကြောင့်ရွေးချယ်စရာစေရန်အခွင့်အလမ်းနှစ်မျိုးလုံးရှိသည်ဖို့လုံလောကျကံကောင်းနေ - ချောနှင့်ရှာဖွေသို့မဟုတ်အခါသမယတောင်းဆိုချက်များအဖြစ်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်အတူနှေးနှေးအဖြစ်.
ငါမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေမရှိဘဲအိမျတျော၌ဖတ်ရှုဖို့အကြှနျုပျ၏သားကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. စိတ်ကူးမနိုင်, ခြံသို့မဟုတ်စက္ကူ. ဒါပေမယ့်ငါအဆမဲ့စကားများနှင့်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်တစ်ခုခုအထံတော်သို့ဆောင် ခဲ့. နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုငြင်းပယ်စိတ်ကူးမနိုင်. ငါးပိ / ပုံကြမ်း / သလောက်သူတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ကူးမိမိလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ်တိကျစွာ scribble / နှငျ့ / မိတ္တူရိုက် - ငါသူ့ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏အရှိဆုံးအောင်လေ့လာသင်ယူကူညီနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.